Tsvagira Arduino, iyo IDE yevanonyanya kushandisa Arduino vashandisi | Mahara emahara
Tsvagira Arduino, iyo IDE yevashandisi vazhinji veArduino
Iyo programmende yemahara emabhodhi iri kuve yemafashoni uye hazvishamise sezvo mabhodhi akaita seRaspberry Pi kana Arduino ari kuita anodhura. Iwo ma tutorial uye evhidhiyo tutorials zvakare anodhura uye zvinongotora maawa mashoma kuti udzidze izvo zvekutanga zvePurogiramu. Imhaka yeizvozvo kune akawanda mapurogiramu anoedza kubatsira kugadzira chaiwo mapurogiramu eArduino kana Raspberry Pi. Kunyangwe zvirongwa zvakaiswa mukati memidziyo iyi kugadzira zvimwe zvirongwa, zveRaspberry Pi tine mienzaniso mizhinji.
Imwe yemapurogiramu anozivikanwa kana software inoenderana neArduino ndeye Scratch yeArduino, software yakanangana nevashandisi veavice iyo inotibatsira kugadzira zvirongwa zvemahara kuti mapurojekiti edu eArduino ashande nemazvo.
1 Chii chinonzi Scratch yeArduino?
2 Maitiro ekuisa sei Scratch yeArduino?
3 Ndeapi mabhodhi anoenderana neSfA?
4 Tsvaga Arduino kana Arduino IDE?
Chii chinonzi Scratch yeArduino?
Asi kutanga isu tinofanirwa kutaura kuti iScratch yeArduino. Kukanda kweArduino chirongwa cheIDE chakanangana nevashandisi vevashandi. Chishandiso chePurogiramu chinogonesa kugadzirwa kwekodhi, kuumbwa kwayo uye kuitiswa kwayo munguva chaiyo. Iyo software yakavakirwa pane inozivikanwa vana app inonzi Kukanda. Ichi chishandiso chinotsvaga kudzidziswa kwePurogiramu pakati pevadiki nekutenda kumabhuroko uye zvirongwa zvekuona izvo zvinobatsira ivo vadiki kukudziridza hunyanzvi hwavo hwakanyanya. Pfungwa yeScratch yeArduino ndeyekushandisa inoonekwa programm uye block programming kuitira kuti chero mushandisi, zvisinei nedanho ravo rehurongwa, anogona kugadzira chirongwa cheArdiuino.
Scratch yeArduino haina hukama chero neiyo Scratch kana neArduino chirongwa, zvisinei, sezvo ari mapurojekiti emahara, akanakisa epurojekiti imwe neimwe akatorwa kuitira kuti mushandisi wekupedzisira agone kushandisa yavo Arduino bhodhi uye software. Kunyangwe isu tichifanira kutaura kuti aya matatu mapurojekiti haataurirane. Ndokunge, Kukanda hakuna sarudzo iyo inova Scratch yeArduino uye iyo Arduino IDE haibvumidze kutarisisa chirongwa ne plugin inonzi Kukanda kweArduino. Kukanda ndeye yakazvimirira software uye Scratch yeArduino chirongwa chakazvimiririra cheplatform iyo, senge Arduino IDE, ine madhiraivha emamwe mabhodhi eArduino ekutaurirana.
Kutenda kuCommunity, Scratch yeArduino ine chishandiso cheApple icho chisingabvumidze chete smartphone kuti itaurirane nechirongwa, asi isu tinogona zvakare kuyedza iyo software yakagadzirwa uchishandisa iyo HTTP protocol.
Maitiro ekuisa sei Scratch yeArduino?
Iyo Scratch yeArduino chirongwa inowanikwa kune akasiyana mapuratifomu, zvirinani kune anozivikanwa kwazvo mapuratifomu ane anonyanya vashandisi: tinogona kuiisa paWindows, paMacOS, yeGnu / Linux uye kunyangwe zvekuparadzirwa kweRaspberry Pi, saka tinogona kuva nechirongwa ichi pane chero komputa yatinoshandisa.
Asi kutanga kwezvose, isu tinofanirwa kutora chirongwa chekumisikidza pakombuta yedu. Vhura webhusaiti yepamutemo yeprojekti tinogona kuwana zvirongwa zveese masisitimu anoshanda.
Kana tikashandisa Windows, tinofanirwa kubaya kaviri pasuru yakadzingwa uye tevedza wizard yekumisikidza iyo yatichafanirwa kuramba tichimanikidza bhatani "rinotevera" kana "rinotevera".
Kana iwe ukashandisa macOS, maitiro acho akafanana kana akafanana. Asi tisati tadzvanya kaviri papakeji yatakatora pasi, tinofanirwa kuenda kuMacOS Kugadziridza uye nekuona kuti sisitimu inoshanda inobvumidza kuiswa kwezvirongwa zvisina mvumo. Kana tangoita izvi, isu tinovhura iyo yekushandisa package uye tinokwevera iyo application kune yeapplication folda.
Kana isu tikashandisa Gnu / Linux, saka tinofanirwa tanga kurodha pasi package inoenderana nepuratifomu yeduMune ino kesi, ichave isiri ye64-bit kana 32-bit mapuratifomu asi asi kana kugovera kwedu kuchishandisa madhiian mapakeji kana Fedora mapakeji, ndokuti, deb kana rpm. Kana tango dhawunirodha pasuru inoenderana nekugovera kwedu isu tinofanirwa kuvhura terminal mune iyo folda, inoitwa nekudzvanya kurudyi pane iyo folda nzvimbo uye isu tinoita zvinotevera mune terminal.
Kana isu tinogona zvakare kuiisa nekutaipa zvinotevera:
Mushure memasekondi mashoma tichiisa chirongwa ichi, tichava nechiratidzo mumenyu yedu ichanzi Scratch yeArduino. Sezvauri kuona, kuiswa kweichi chinoonekwa IDE kuri nyore uye kazhinji hakudi chero chirongwa chekunze kuti chishande nemazvo.
Ndeapi mabhodhi anoenderana neSfA?
Zvinosuruvarisa haasi ese mabhodhi eArduino Project anoenderana neScratch yeArduino. Kwechinguva zvinowirirana chete Arduino UNO, Arduino Diecimila naArduino Duemilanove. Mamwe mabhodhi acho haawirirane nechirongwa asi hazvireve kuti haakwanise kuita kodhi yatinogadzira, kureva kuti kodhi yatinogadzira inogona kuendeswa kune imwe IDE kuitira kuti inyorwe uye kuitiswa. Kunge Kukanda, SfA inogona kutumira kodhi kune IDE senge Arduino IDE uye kutumira chirongwa kune mamwe mabhodhi eProjekiti anoenderana neArduino IDE uye kuti vanokwanisa kushanda nemazvo vasingavimbe nekuti kutakura kwacho kuri kuburikidza neScratch yeArduino.
Nezve kodhi iyi, zvinosiririsa kuti inyaya yeRisense, mafaera haasi omni-enongedzo, ndiko kuti, maScratch mafaera anozivikanwa neScratch yeArduino asi iwo echirongwa ichi haapindirane neScratch. Kunyangwe iyo kodhi inogadzirwa nezvirongwa zvese inoenderana neArduino IDE. Dambudziko iri chinhu chinonyangarika nekufamba kwenguva uye nemipiro yeCommunity, asi parizvino hazvigone kuitwa.
Tsvaga Arduino kana Arduino IDE?
Panguva ino, iwe unonyatso kushamisika kuti chii chiri nani kuronga Arduino Tsvaga Arduino kana Arduino IDE? Mubvunzo wakakomba une pfungwa shoma unogona kupindurwa kana tichinyatso kuziva kuti chikamu chedu chehurongwa chii. Scratch yeArduino ndeye IDE iyo inoitirwa vashoma kupfuura vadzidzi uye vashoma nyanzvi vashandisi iyo inobatsirwa neinoonekwa mamiriro ezvirongwa zveblock, chimwe chinhu chakafanana neicho chinonzi semi-programming. Ipo Arduino IDE iri IDE yehunyanzvi uye epakati epakati mapurogiramu avo vasingade izvo zvinoonekwa kuronga zvakanaka. Y kana chirongwa ichi chiri chemwana kana wechidiki, zviri pachena kuti Kukanda kweArduino chirongwa chakakodzera.
Asi, kana isu tine timu ine simba, komputa yedesktop yaizokwana, zvakanakisa kuva nemhinduro mbiri. Sezvatakambotaura, Scratch yeArduino inogona kutibatsira nekugadzira mabhuroko uye Arduino IDE inogona kutibatsira isu kutumira chirongwa ichi kumabhodhi akasiyana siyana, kungave kubva kuArduino kana kubva kune mamwe mapurojekiti anoshanda neArduino IDE. Asi, chero zvakadaro, sarudzo ndeyako Ndeipi yaunosarudza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Arduino » Tsvagira Arduino, iyo IDE yevashandisi vazhinji veArduino
5 Mahara Mahara Hardware mapurojekiti atinogona kuvaka neLego zvidimbu
Maitiro ekugadzira yakagadzirirwa uye yakasarudzika jukebox